Global Voices teny Malagasy » Ahoana ny fitsidihana fiaran-dalamby ao Shina mba tsy ho voampanga ho manao fitsikilovana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Mey 2019 4:23 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Shina, Mediam-bahoaka, Saripika, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Septambra 2014)
Raha hijery sy maka sary fiaran-dalamby ao Shina ianao dia mila mitandrina, raha tsy izany ho voampanga ho mitsikilo indostria, araka ny filazan'ilay mpijery sy maka sary fiaran-dalamby malaza sady mpisera YouTube, RailKingJP .
Satria tsy mitovy ny any Japana ny ao Shina, izay tsy fialam-boly malaza ny mitady fiaran-dalamby mba haka sy hizara sary antserasera. Na izany aza, toerana tsy hay tohaina ho an'ireo Japoney mpankafy lalamby i Shina, noho ireo fiaran-dalamby mbola mandeha amin'ny etona miasa ao.
Mba hanampiana azy ireo, mitantara ireo zavatra niainany tany Shina miaraka amin'ny toro-hevitra sy fikafika rehefa manaraka fiaran-dalamby sy mijanona eo amin'ny ilany eken'ny lalàna (maro amin'ireo horonan-tsariny YouTube no ahitana dikan-teny anglisy) i RailKingJP :
Ankoatra ny fanazavana mikasika ny hoe ahoana no atao mba tsy ahiahiana anao, manazava ny fomba ahafahan'ireo mpitsidika fiara-dalamby mahita hotely ao Shina, ao Chengdu tamin'ity indray mitoraka ity i RailKingJP
Ny fanamby? Ny mitady hotely misy fifandraisana aterineto izay mahazo mandray vahiny ihany koa
Mitantara ny fihaonany tamin'ny lalana rehetra izy:
Ny lesona ho an'ireo mpitsidika fiaran-dalamby? Ataovy azo antoka fa manana fifandraisana aterineto ny hotely, ary aza matahotra manamarina ny efitra alohan'ny handoavana ny volanao.
Lahatsary iray hafa no mandrakitra ny fikasany hahita ireo fiaran-dalamby mandeha amin'ny etona mamoaka setroka manidina  avy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra. Toa zavatra tsara jerena ny”rahona olatra”:
Tamin'ny diany tany Shina, matetika miditra lalina loatra i RailKingJP mba hahazo sary tonga lafatra. Amin'ity lahatsary ity, nifoha maraina be izy ary nandeha tamin'ny haizina mba hijery toerana handinihana akaiky ny lalamby Shinbanxi. Manome topi-maso tsy manam-paharoa momba ny fitaterana sy ny kolontsaina Shinoa ambanivohitra ny lahatsariny:
Raha tena tia fiaran-dalamby ianao, dia nampiditra lahatsary mahavariana maromaro i RailKingJP, tahaka ity lahatsary mampiseho fiaran-dalamby miaraka amin'ny kanto lalamby haingam-pandeha ao amin'ny fanjakana Shina ity.
Toa hita fa monina ao akaikin'i Tokyo i RailKingJP. Matetika mivezivezy noho ny antony ara-pihariana izy, ary mahavita mahita fiaran-dalamby na aiza na aiza alehany. Noho izany, nandefa lahatsary am-polony misy ireo fiaran-dalamby Japoney i RailKingJP (na izany aza, tsy ny lahatsary rehetra no ahitana dikan-teny anglisy).
Amin'ireo lahatsariny sasany Japoney; manome toro-hevitra mahasoa manampy ireo mpitsidika fiaran-dalamby izy hanatsarana ny lalaon'izy ireo rehefa miezaka maka sary ny fiaran-dalamby ankafiziny izy ireo.
Ohatra, araka ny filazan'i RailKingJP, ity ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra raha hijery ny fiaran-dalamby haingam-pandeha (ho an'ireo mpankafy lalamby sy mpaka sary, mampiseho olana manokana ny fiara-dalamby haingam-pandeha noho ireo lalana miakatra manafina ny fiaran-dalamby ankoatra ireo toerana vitsivitsy):
Amin'ity lahatsary ity, mampiseho fitaovana mahasoa novidiany tany Akihabara i RailKingJP izay ahafahan'ireo mpijery fiaran-dalamby mahafantatra rehefa misy fiaran-dalamby manatona :
Tahaka ireo mpijery fiaran-dalamby marobe, voasarika hanaraka sy handrakitra ireo fiaran-dalamby tsy fahita firy i RailKingJP, matetika avy amin'ny toerana fijerena fiaran-dalamby “mahazatra” manodidina an'i Japana. Nampiditra lahatsary vitsivitsy amin'ny endrika mahazatra amin'ny karazana antsoina hoe “tazana anoloana” (前面展望 , zenmen toubou) ihany koa izy. Ny “tazana anoloana” nampidirin'ireo mpankafy lalamby no fomba tsara indrindra hitrandrahana ny rafitra lalamby ao Japana amin'ny alalan'ny Youtube.
Ity ny dian'i RailKingJP farany niainga tao Shinjuku ao Tokyo ho any amin'ny toeram-pitsangatsanganana ao Hakone , araka ny hita eo anoloan'ny varavarankelin'ny Fiara mahafinaritra Odakyu Romance:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/24/138889/
 mpisera YouTube, RailKingJP: https://www.youtube.com/channel/UCevEhPt0ipo-0BJTymdNPRA
 mamoaka setroka manidina: http://en.wikipedia.org/wiki/Fly_ash
 niainga tao Shinjuku ao Tokyo ho any amin'ny toeram-pitsangatsanganana ao Hakone: https://goo.gl/maps/i99va